Matrageritiondị matragedị na igbe akwụkwọ opupu ihe ubi | Rayson
Rayson etolitela ka ọ bụrụ onye na-emepụta ọkachamara na onye na-eweta ihe a pụrụ ịdabere na ngwaahịa dị elu. Na usoro mmepụta ahụ dum, anyị na-eme ka usoro njikwa usoro nke ọma. Ebe ọ bụ na anyị guzobere, anyị na-agbaso oge niile, njikwa sayensị, na ndozi na-aga n'ihu, ma na-enye ọrụ dị mma iji zute na ihe ndị ahịa chọrọ. Anyị na-ekwe nkwa na ngwaahịa ngwaahịa ọhụrụ anyị dị ọnụ ala na igbe igbe ga-eweta ọtụtụ uru. Anyị na-adị njikere mgbe niile ịnata nyocha gị. Matrage zuru oke na igbe igbe ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa ngwaahịa anyị dị ọnụ ala na igbe ndị ọzọ, nabata gị ịkpọtụrụ anyị.Thi na-achasi ike. Onu ogugu nke stitches na otu inch nke a na-aguta iji gosiputa ihe nlere.